Ammas lolli, walajjeesuu fi mana hidhaatti walguuruun eegalamee? – Oromedia
Home » Yaadannoo » Ammas lolli, walajjeesuu fi mana hidhaatti walguuruun eegalamee?
By B Raasoo Dibaabaa
Addi Bilisummaa Oromoo karaa nagaa qabsaahuuf hogganni isaa edda biyyatti deebi’ee kunoo reefu ji’oota sadii ta’a.ODP nis lotoriin biyya bulchuu baheefii aangoo mootummaa edda dhuunfatee reefu ji’ootni jaha darbu.
Mana hidhaa Qaallittii keessa taa’ee yeroo hedduu dhaamsa Dr.Abiy midiyaalee adda addaa irratti dabarsu qalbii fi onnee guutuun hordofaan ture.Dhaamsasaa keessaa kan ani yoomuu hin dagannee fi abdii guutuu natti horaa turan:
-Aangootti ol yaabbaachuun akkuma jiru aangoo gammadnee gad lakkisuufis yoomuu qophii ta’uu qabna
-Kana booda walajjeesuu fi mana hidhaatti walguuruun dhaabbatee jaalalli ni injifata; yeroon yeroo dhiifatama waliif gochuu fi yeroo jaalalaa ti
-Biyya kana keessatti hatattamaan dimokraasii dhugaa fi walqixxummaa mirkaneessinee Itiyophiyaa diigamuurraa baraaruu qabna fi kkf dha.
Ji’ootii jaha keessatti waadaaleen kun hundi diigamanii biyyattiin suuta suutaan bakkuma warri TPLF dhiisanii deemanitti (ykn ammoo haala sanaa olitti hammaataa ta’uu malu keessa) seenaa jirti.Jechootiin babbareedoo Dr. Abiy irra deddeebi’ee dubbataa ture akka fixeensa ganamaa badaa jiru.Ilaalchi abbaa irrummaa haala sodaachisaa ta’een bu’ura ijaarrachaa jira.Biyya kana keessatti sirna abbaa irree daran hammaataa ta’e gad dhaabuuf si’aa’inni itti fiigamaa jiru guddaa dha.
Harka lafa jalaa fi ifatti yeroon filannoo akka dheeratu shira xaxuun “akkuma yaabuun jiru bu’uunis jira” dhaamsa jedhu waliin hin deemu. ABO’n filannoo keessatti yoo hirmaate nu injifata yaaddoo jedhurraa ABO qabsoo karaa nagaa keessaa shiraan baasuuf fiiguunis abbaa irrummaa dha.Guutuu Wallaggaa, Iluu,Lixaa fi Kaaba Shawaa,Gujii fi Booranatti Raayyaa Ittisa Biyyaa bobbaasuun ummata nagaa gooluun jaalala ta’uu hin dandahu. Har’as ilmaan Oromoo ukkaamfamanii mana hidhaatti guuramuun, ajjeefamuun bifa haaraan jalqabee jira.Ji’oota jaha keessatti waadaaleen Dr. Abiy baqanii baduun haalaan yaaddessaa fi gaddisiisaa dha.
Dhumarratti qabxiilee sadii kaaseen yaadakoo guduunfa:
1. Waan gochuu dandeenyuuf qofa seeraan ala gochaaleen raawwannu hundi oolee bulee gatii guddaa akka nu baasisu hubannoo keessa galchuun haa sochoonu( principle of blow back effect).Kana fagoo otoo hin deemiin aangawoota TPLF irraa barachuu ni dandeenya.Gochuu dandeenyaatiin qofa waggootii 27 guutuu biyyattii akka barbaadanitti oofanii har’a maal keessa akka jirru ija onnee keenyaa bannee hubachuuf haa yaallu.
2. Pick one end of a stick then you have already picked the other end.Oromoo ajjeessuu fi hidhuun aangoorra bara baraan turuu yoo hawwine ( ykn haraqeen aangoo mataatti ol nu bahee nu macheessee tarkaanfii akkasitti yoo nu oofe) sana waliin walqabatee diiggaa fi barbadaahinsa biyyatti kana keessatti uumamuuf deemuuf ittigaafatamummaa fudhachuuf haaqophoofnu.
3. Waggootii 27 darban seeraan ala aangoo mootummaatti dhimma bahuun warra dhiittaa mirga dhala namaa fi saamicha gaggeessan seeratti dhiyeessuuf tattaaffii gochuun dura har’a Oromiyaa keessatti gochaaleen dhiittaa mirga dhala namaa raawwattan boru yakka dhiittaa mirga dhala namaatiin kan isin hin gaafachiifne ta’uu keessa deddeebi’aatii ilaalaa.
Previous: Waltahiinsa: Tokko ala dhaabanii, tokko mana kaayanii guddachuun hin ta’u.
Next: Pirofesar Asmaroom Laggasaa eenyu?